October 30, 2020 Farah Abdikadir Mohamed 2
GAROOWE(P-TIMES) – Dadka Puntland ayaa ilgaar ah ku eegayay khudbadda hadaljeedinta Madaxweyne Deni ee baarlamanka, iyadoo horey u baqday bilowgii bishan Kulankii Kursiga & Kaamirada ee Madaxweynuhu Isniinta kasta ee bilowga bisha ah jeedin jiray, waxaana lafilayay in uu ka hadlo arrimo ay ka mid yihiin Safaradiisii qaatay 50 cisho ee uga maqnaa gudaha mandiqada, waxyaabaha Xukuumaddiisu ay ka qabatay Kaabayaasha dhaqaalaha oo xladooda laga deyrinayay iyo arrimaha la xariira safarkiisii Qarsoodiga u badnaa ee Nairobi ila Imaaraatka.
Madaxweynaha Puntland dhammaan safaradii kala duwanaa ee uu ku maqnaa 50 maalmood wuxuu ka xusay kii Jabuuti oo qaatay maalmo kooban, isagoo sheegay.
Laakiin Madaxweynuhu marnaba ma soo qaadin midkii Kenya & Imaaraatka Carabta oo dhammaantood ahaa kuwa la rumeysan yahay in looga wada hadlay arrimaha siyaasadda ee doorashooyinka 2021-ka, mana soo qaadin Madaxweynuhu sinaba.
Arrinta lafilayay in uu si daahfuran uga hadlo ayu wajahay Madaxweyne Deni, waana qadiyadda Shirkadda laga leeyahay Imaaraatka Carabta ee gcanta ku haysa dekeda Boosaaso, iyadoo aan fulin heshiiskii ay horey ula gashay Puntland sannadkii 2017-kii.
Madaxweynuhu wuxuu muujiyey kalsooni-darro ku wajahan in aysan shirkaddu fulineyn heshiiska, isagoo sheegay in ay lataliyayaal xagga sharciga ah latashadeen oo dadweynaha looga baahan yahay in ay ku kalsoonadaan golayaashooda.
Baarlamaanka waxaa horyaala qaraarka Shirkada P&O oo ay Kalfadhigii hore dib ugu dhigteen midkan, waxaana xiligaas dib loogu dhigay dalab ka yimi xagga Xukuumadda Madaxweyne Deni, oo sheegtay in ay August la balansan tahay madaxda shirkadan.
Laakiin, DPWORLD wey diiday sida ay xoguhu cadeynayaan in ay la kulanto Wafdiga Puntland, Madaxweyne Deni oo dhawan gaarayna wey ka cududaarteen 2 isku day oo uu doonayey in uu kula kulmo, balse Siciid Deni ayaa sheegay in COVID19 kulamadaas uu dib u dhigay, dhinaca kalena Madaxweynuhu madaxda Imaaaraatka ayuu kala hadlayay arrimaha Siyaasadda Soomaaliya & Doorashooyijnka soo wajahan.
Madaxweynuhu ma qarin in ay doonayaan in Xariirka Imaaraatka Carabta & Puntland uusan saameyn ku yeelan arrinta shirkadan P&O ee qeybt ka ah DPWORLD, waxayna Dubia gacanta ku haysa ciidamada Badda Puntland oo mashruucooda si aan daahfurneyn loo maamulo dhaqalaha laga helo.
Intii uu khudbaddiisa waday Madaxweyne Deni wuxuu soo qaaday mashaariic kala duwan oo la hirgaliyey, wuxuuna shegay in ay horumar wnaagsan sameeyeen mudadii u dhaxaysa labada kalfadhi oo ay ku jiraan dibu dhiska wadooyinka.
Hadda Madaxweynuhu wuxuu u socdaalayaa Itoobiya, ka dibna wuxuu uga gudbayaa Imaaraatka Carabta oo markale dib ugu yeeray, waxaana dhammaan safaradan ay khuseeyaan doorashooyinka 2021-ka.
Markaad madaxda puntland KU waalan jirtaa la gaaray hhhh
Mr.Dalmar wilkan Xunka ah maxa ka maqan oo uu markasta uhadal haya shaqada madaxweynaha puntland Dr.Saciid Abullahi Danni, ma’isga shaqo udhitay?? puntland waxay Xaq uledahay siyasadeda in aay xafidato,wil xuna in uu iska dhigo qof siyasada puntland xaq uleh.